बिन्दा घिमिरे योगेशकी श्रीमती मात्रै हुन् ? |
बिन्दा घिमिरे योगेशकी श्रीमती मात्रै हुन् ?
प्रकाशित मिति :2019-02-13 13:48:24
गएको शुक्रबार एक अनलाइनमा समाचार आयो, ‘नर्सिङ परिषदमा योगेश भट्टराईकी श्रीमती…. ।’
बिन्दा घिमिरे नेकपाका नेता तथा सांसद योगेश भट्टराईकी श्रीमती हुन् । उनलाई गएको असार महिनादेखि नेपाल सरकारले काउन्सिलमा निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिएको थियो । साउन महिनादेखि पूर्ण कार्यभार सम्हालेकी हुन् ।
नर्सिङ परिषदमा बिन्दा नियुक्त भएको ९ महिना पूरा भइसकेको छ । ९ महिनापछि नर्सिङ परिषद्मा योगेश भट्टराईकी श्रीमती भनेर समाचार छापियो । ‘उहाँहरुले ९ महिनाअघि यो समाचार किन लेख्नुभएन ?’ समाचार छापिएपछि अचम्ममा परेकी बिन्दाले महिला खबरसँग भनिन् ।
नर्सिङ परिषद्मा नेपाल नर्सिङ् परिषद् ऐन, २०५२ अनुसार नियुक्ति हुन्छ । ऐनमा नेपाल सरकारको चाहना बमोजिम नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । बोलिचालीको भाषमा ‘राजनीतिक नियुक्ति ।’
बिन्दाको नियुक्ति कानूनसम्मत छैन त ? नर्सिङ परिषद्मा नेपाल नर्सिङ् परिषद् ऐन, २०५२ को दफा १३ को उपदफा १ ले भनेको छ, ‘परिषद्को दैनिक प्रशासकीय काम, कारबाही गर्न नेपाल सरकारले नर्सिङ विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच वर्ष नर्सिङ व्यवसायमा संलग्न रहेको कुनै व्यक्तिलाई रजिष्ट्रारमा नियुक्ति गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।’
बिन्दा नर्सिङ विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अनि नर्सिङ पेशामा २७ वर्षदेखि कार्यरत छिन् । उनले नर्सिङ स्नातक तहमा पढ्ने विद्यार्थीको लागि सामुदायिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयको ३ वटा किताब पनि निकालिसकेकी छिन् । बिन्दा थप्छिन्, ‘म अयोग्य भए ९ महिना अघि नै मबिरुद्ध मुद्दा परिसक्नुपर्ने ।’
उनको योग्यता परिषदमा राजिष्ट्रार हुन नपुग्ने कतै देखिँदैन । न त कार्यकुशलतामा नै प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । ऐनले नै काम कर्तव्य र अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ । जसअन्तर्गत रजिष्ट्रारको काम ‘परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, परिषद्को बैठकमा पेश गर्नुपर्ने छलफलको विषय सूची तयार गर्ने र तोकिए बमोजिम अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार ।’ स्पष्ट उल्लेख छ ।
महिलाको क्षमतामा श्रीमानको पद जोडेर टिप्पणी गर्नु कति जायज हो ? अहिले बिन्दालाई यहि प्रश्न खेल्छ । भन्छिन्, – ‘म पनि पुरुषले झैं कमाउन सक्छु । मेरो क्षमता योग्यता पनि छ । तर, मेरो हैसियतको कुनै गणना हुँदैन ।’
‘घर बनायो, घडेरी जोड्यो भने योगेश भट्टराईले कसरी बनायो भनेर स्रोत खोज्छन् । तर, नर्सिङ पेशामा स्थापित बिन्दाको कमाइबारे कसैले सोच्दैनन् ।’ बिन्दालाई यही कुराले घोचिरहन्छ ।
यस्तो समस्या उनले कलेज जीवनमा पनि भोगेकी थिइन् । स्नातकोत्तर तहमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा नाम निकाल्दा ‘योगेशको श्रीमती’ पो रहिछे भने । तर, उनले आफ्नो क्षमता र दक्षताले जितिन् ।
हिजोआज नेताको परिवारको व्यक्ति अझ बढी महिलालाई गरिने प्रश्नबारे उनको टिप्पणी छ, ‘बरु ऐनमा दक्ष नै भएपनि नेताका परिवारका व्यक्तिले कतै नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो । होइन भने सस्तो टिप्पणी किन ?’
बिन्दाको मात्रै होइन केही समयअघि इजरायलको राजदुत नियुक्त भएकी अञ्जान शाक्यको विषयमा पनि त्यस्तै टिप्पणी भयो । सञ्चार माध्यममले खुलेरै लेखे, ‘प्रधानमन्त्रीकी साली राजदुतमा नियुक्त ।’
सामाजिक सञ्जाललाई मसला पनि भइहाल्यो । ‘राजनीतिक नियुक्ति पाउन प्रधानमन्त्रीको नातागोता हुनुपर्ने रहेछ’ भन्ने टिप्पणी भाइरल भयो । वास्तविकता भने त्यस्तो थिएन । प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती र उनको थर ‘शाक्य’ भएका कारण मात्रै यस्तो टिप्पणी आएको थियो ।
त्यतिबेला पनि कुनै पनि सञ्चार माध्यमले अञ्जान शाक्यको अध्ययनको विषय, कुटनीतिक ज्ञान, सीपमा टेकेर उनी राजदुत नियुक्त हुन योग्यता पुगेकी छिन् वा छैनन् विश्लेषण गरेनन् ।
‘प्रधानमन्त्रीकी साली’ भन्ने मिडियामा आएको प्रसंग संसदीय सुनुवाइसम्म पुग्यो । सुनुवाइका क्रममा काँग्रेसका सांसद भिमसेनदास प्रधानले प्रश्न गरेका थिए – ‘तपाईको प्रधानमन्त्रीसँग नाता जोडिएको हो कि होइन ? तपाई राजदूतका लागि योग्य हुनुहुन्छ, मिडियाले तपाईहरुको नाताको विषय पनि उठाइदिएको छ । यसबारे स्पष्ट पारिदिनुपर्छ ।’
महिलाको क्षमतामा श्रीमानको पद जोडेर टिप्पणी गर्नु कति जायज हो ? अहिले बिन्दालाई यहि प्रश्न खेल्छ ।
भन्छिन्, – ‘म पनि पुरुषले झैं कमाउन सक्छु । मेरो क्षमता योग्यता पनि छ ।
तर, मेरो हैसियतको कुनै गणना हुँदैन ।’
प्रधानको प्रश्नको जवाफ शाक्यले दिनै परेन । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले शाक्य प्रधानमन्त्री ओलीकी साली भन्ने कुरा आएपनि त्यो सही नभएको बताए ।
उनले भने, – थर मिल्दैमा साली नै हुँदैन । शाक्यको माइती घर र मेरो घर सँगै छ । मिडियामा आएको हल्ला सही होइन ।’
यत्ति प्रसंग काफी छ कि समाजको धारणा बनाउने सञ्चार माध्यम नै महिलाको अस्तित्व अझै स्वीकार गर्दैनन् । हचुवामा महिलाप्रति दृष्टिकोण बनाउँछन् । आफ्नो पेशामा दक्ष भएपनि उनको व्यक्तिगत नातासँग जोडेर क्षमतामा प्रश्न उठाउनु कत्तिको जायज हो ?
सञ्चारिका समूहका पूर्व अध्यक्ष पत्रकार बबिता बस्नेत यसबाट नेपाली मिडियाले अझैसम्म महिलाको पहिचान स्वीकार नगरेको बुझिने बताउँछिन् । महिला आफ्नै नाम, काम र पहिचानबाट चिनिन अझै चुनौती छ ।
राजनीतिक सम्बन्धकै आधारमै कुनै महिलालाई एक्कासी कुनै पदमा नियुक्ति गर्यो भने पक्कै समाचार बन्छ । त्यो सञ्चार माध्यमको विषय पनि हो । तर, उसको कुनै पेशा प्रतिको लामो अनुभव, दक्षता हुँदाहुँदै पनि प्रश्न उठाउनुले भने महिलाको क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको बुझिने पत्रकार बस्नेतको धारणा छ ।
‘हुन त नेपाली सञ्चार माध्यममा पुरुषत्व हावी छ । समाचारका कन्टेन्ट, स्रोतमा महिला निकै कम मात्रै हुन्छन् । माहिलामाथिको टिप्पणी त्यसैको बिम्ब पनि हो ।’ पत्रकार बस्नेत भन्छिन्, ‘महिलाहरु आफ्नो धरातल बनाउन संघर्ष गरिरहेको र उनीहरुको व्यवसायिक संसारलाई स्वीकार नगरको अवस्थामा यस्ता विषय आइरहन्छन् ।’